Internedka ka adeeganayso | Hallå konsument - Konsumentverket
Ku cusub Swiidhan: Internedka ka adeeganayso
Waxa jira shirkado badan oo internedka oo iibiya alaab iyo adeegyo, laakiin ma aha in dhamaan shirkadahaas lawada aamino.
Samee baadhitaan taxadir leh oo shirkada aad doonayso inaad wax ka soo iibsato:
Miyuu jiraa cinwaan iyo lambar telefoon oo shirkadahaas ah?
Maxay dadku u arkaan shirkadahaas? Waxaad inta badan internedka ka heli kartaa dib u faaqidaad ku sabsan waxa xun ama waxa wanaagsan ee shirkadahaas ah.
Haddii aad wax ka iibsato internedka shirkad Swiishish ah, waxaad markasta haysataa xuquuqda dib uga laabashada (ångerrätt). Xuquuqda dib uga laabashada micnaheedu waxa weeye in aad is badeli karto, ka laaban karto heshiiska, oo aad celin karto alaabta muddo 14 maalmood ah laga bilaabo maalintaa iibsiga. Waxa aad markaa kaliya bixin kartaa kharshka aad shayga dib ugu celinayso oo kaliya. Haddii aanad isticmaalin shayga, waxa laguu soo celin doonaa lacagta inta kale.
Dalabaadka lagu siinaayo ee aan macquulka u eekeyn
Waxa jira dalabaadyo badan oo internedka oo aan macquul u eekeyn – waxa laga yaabaa inaad, tusaale ahaan, in lagugu siiyo moobayl ama tablet hal kroon oo kaliya ah. Dalabyada noocaas ah inta badan waxay shuruud u ah rukunsi qaali ah, kaas oo ay adkaan karto in laga baxo. Haddii aad ogolaatey dalabka, waa inaad bil kasta bixiso kharash badan.
Ka foojignow waxa kale oo aad dalabyadan ka heli kartaa meelo ka baxsan internedka – waxa laga yaabaa in, tusaale ahaan, laguugu soo bandhigo xayaysiiska caadiga ah, waraaqo, ama qof dariiqa wax ku iibiya.
Haddii aanad haysan aqoonsi
Ma hadda uun baad heshay lambarkaaga shakhsiga ee ka yimaada Hay'ada Cashuuraadka Swiidhishka (Skatteverket)? Ogsoonow in aanad waxba internedka kaga iibsan karin ilaa aad helayso kaadhkaaga ID-ga (legitimation). Waxaad u baahan doontaa inaad tusto kaadhkaaga ID-ga si aad xafiiska boosta ugu soo qaadato baakeedka. Taasi waxa sidoo kale ay saameynaysaa haddii aad rabto inaad bangiga ka bixiso fatuurad.
Dadka ku cusub Swiidhan ayaa talooyin kale ka heli kara halkan
Proofread 16 Bisha Sagaalaad 2019